Hab-dhaqanka ugufiican ee lagu hirgaliyo Raadinta Raadinta Wicitaanka ee Xeeladaha Suuqaaga oo dhan | Martech Zone
Raad-raac waa tiknoolajiyad la aasaasay oo hadda ku socota dib u soo nooleyn weyn. Kordhinta taleefannada casriga ah iyo macaamiisha cusub ee moobiilka, awoodaha gujinta-wicitaanku waxay noqonayaan kuwo si aad ah ugu soo jiita suuq-geynta casriga ah. Qiyaastaasi waa qayb ka mid ah waxa kicinaya kororka 16% ee sanadka oo dhan ee wicitaannada soo gala ee ganacsiyada. Laakiin inkasta oo ay korodhay wicitaannada iyo xayeysiinta moobiillada, qaar badan oo suuqleyda ah ayaan weli ka boodin wicitaanka raadinta xeelad wax ku ool ah oo suuqgeyn ah waxayna ku luminayaan sida loo toogto fallaartaan muhiimka ah ee galka galka caqliga leh.
Inta badan hogaamiyaasha warshaduhu waxay isku dayayaan inay wax ka qabtaan caqabada beddelka iyadoo loo marayo aragti weyn oo ku saabsan xayeysiinta ama aan bixinaynin. Laakiin ma jiro wax xal ah oo ku soo dhowaanaya in la awoodi karo, marin u helid iyo sahlanaan-adeegsi oo ay dhuftoyinka casriga ah ee raadraaca wicitaannada ay bixiyaan. Marka ay timaaddo hirgelinta wicitaanka raadinta ee dhammaan xeeladahooda suuq-geynta, ganacsiyada waxay u baahan yihiin inay maanka ku hayaan dhaqammadaan ugu wanaagsan si si wanaagsan loogu falanqeeyo cabirrada suuq-geynta iyo soosaarida fikradaha macnaha leh
Sida laga soo xigtay sahan cusub oo dhowaan ka yimid Shop.org iyo Forrester Research, Gobolka Retailing Online, hagaajinta moobiilku waa mudnaanta koowaad ee dukaamada. Macaamiisha 'qabatinka sii kordhaya ee moobiilka moobiilku wuxuu horseeday koror xagga mugga wicitaanka gudaha ah, taasoo ka dhigeysa raadinta wicitaanka inay tahay cunsur muhiim u ah istiraatiijiyadda suuq geynta dijitaalka ah. Maaddaama taleefannada casriga ahi ay hadda yihiin habka looga hor tago kuwan macaamil ganacsi-diyaar ah macaamiisha, hagaajinta boggaaga mobilada waa tallaabo muhiim u ah hirgelinta raadinta wicitaanka.
Adoo u xilsaaraya lambar taleefan oo la socon kara oo u gaar ah olole kasta oo suuq-geyn ah, adeegyada raadinta wicitaanku waxay awood u leeyihiin inay go'aamiyaan ilaha wicitaannadaada wacaya. Heerkan aragtida ahi wuxuu u oggolaanayaa ganacsiyada inay ogaadaan xayeysiiska xayeysiiska ah, boorarka, ololaha bulshada ama xayeysiiska PPC soo jiitay macmiilka ku filan inuu waco. Guji-u-yeer CTA's (Wicitaanada Waxqabadka) waxay na xusuusineysaa in aaladaha aan gacanta ku hayno ay wali yihiin taleefano, awood u leh inay si ku-meel-gaadh ah noogu xidhaan qof jooga meheradda aan daawaneyno.
Erayo-fure iyo Suuq-geyn Macluumaad-wadata
Suuq geynta mashiinka raadinta (SEM) wuxuu sii wadaa qabashada saamiga ugu badan ee kharashka suuq geynta internetka. Inta badan sida raadinta wicitaanka gudaha, raadinta heerka keyword-ka waxay abuureysaa lambar taleefan oo u gaar ah ilaha muhiimka ah ee goob kasta oo raadinta ah, taas oo u oggolaanaysa ganacsiyada inay hoos ugu dhacaan heerka ereyga raadinta shaqsiga ayna xiriiriyaan wicitaanada booqdayaasha gaarka ah ee websaydhka ah iyo ficiladooda goobta. Suuqgeynta xogta kexeysa waa qeyb muhiim u ah ganacsiyada raadinaya inay ku balaariyaan kanaalkooda suuq geynta dhamaan warbaahinta dhijitaalka ah. In kasta oo ganacsiyada yar yar badankood ay u maleeyaan inay aragti ka heli doonaan shabakadda Analytics kaligood, waxay badanaa iska indha tiraan awooda wicitaanka weligaa ee muhiimka ah.
Isku-darka CRM & Falanqaynta
Isku-darka wicitaanka taleefanka Analytics waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee ganacsiyada ay ku kasban karaan fikradaha qotodheer ee suuqgeynta. Iyagoo isku xiraya xalka raadinta wicitaankooda softiweerkooda hadda, ganacsiyada waxay lahaan karaan barxad isku xiran, xoog badan Analytics si looga faa’iideysto. Marka xogta la eego iyadoo lala kaashanayo khadka tooska ah Analytics, ganacsiyada waxay kuheli karaan aragti guud oo ku saabsan qarash gareynta xayeysiinta, taas oo u ogolaaneysa inay arkaan waxa shaqeynaya ayna hagaajiyaan ama baabi'iyaan waxa aan aheyn. Aragtiyadan ayaa ka caawisa ganacsiyada inay si weyn hoos ugu dhigaan qiimaha-horseedka, wicitaannada u beddelaan hoggaan u qalma oo kordhiya ROI ee dadaalka suuq-geynta.
At CallRail, raadinta wicitaan iyo Analytics madal, waxaan ka caawinnaa milkiilayaasha ganacsiyada inay ogaadaan ololeyaasha suuqgeynta iyo ereyada muhiimka ah ee raadinta wicitaanada taleefannada qiimaha leh. Macaamiishayada Qalabka Dhismaha Qaranka waxay hirgeliyeen adeegyadeenna raadraaca wicitaannada waxayna awood u yeesheen inay yareeyaan kharashka xayeysiinta PPC 60% iyadoo weli la ilaalinayo isla heerka iibka. Shirkaddu sidoo kale waxay awood u yeelatay inay wax soo saar liidata ka soo saarto istiraatiijiyaddooda suuq-geyn iyada oo ay ugu wacan tahay aragtida ay ka heleen CallRail.
CallRail runti farqiga ayuu noo sameeyay. Hadda waxaan haystaa sawir adag oo ku saabsan iibka, dakhliga iyo u dhiganta margin. Mar dambe ma siinayo xayeysiis aan sifiican u shaqeyneynin faa'iidada shakiga; Kaliya waan baabi'in karaa kharashka. CallRail wuxuu na siiyay qaybtii ugu dambeysay ee macluumaad ee aan u baahanahay si tan ay u dhacdo. David Gallmeier, Suuqgeynta iyo Horumarinta NBS
Raadinta wicitaanku waxay cadeeyeen inay muhiim u tahay hagaajinta khibrada macaamiisha, tababarka gudaha ee saxda ah, suuq geynta xogta, iyo go'aamada jiilka hogaaminta. Adoo ku hirgelinaya raadinta wicitaanka istiraatiijiyadooda suuq-geynta, ganacsiyada waxay gacan ka geysan karaan xiritaanka wareegga ROI iyadoon bangiga la jebin. Raadinta wicitaanku waxay ka caawin kartaa ganacsiyada inay bilaabaan inay diiradda saaraan ololayaasha suuq-geynta ee shaqeynaya - iyo inay joojiyaan lacagta lagu khasaariyo kuwa aan shaqeynin.
Bilow Tijaabadaada Wicitaanka Bilaashka ah
Tags: raad raadinwicitaanraadinta wicitaanka ololahaheer wicitaan olole raad raacsuuq-geynta xogtakeyword raadinta wicitaankaraadinta wicitaanka moobaylka
Lance Weatherby waa Madaxweyne ku-xigeenka Iibka iyo Suuqgeynta ee CallRail. Wuxuu u hamuun qabaa dhisida shirkadaha internetka ee macaamiisha diirada saaraya iyo rikoor la xaqiijiyay oo ah guul gaarista. Wuxuu u adeegay sidii Hannaan Bixiye leh Xarunta Horumarinta Teknolojiyada Sare ee Georgia Tech wuxuuna ku qabtay horumarinta ganacsiga fulinta, suuqgeynta iyo jagooyinka guud ee maamulka nCrowd, CipherTrust, EarthLink, iyo MindSpring.
Hadaad Adeegto Millennials, Waxaad Kafiicantahay U Adeegida Video
Stamplia: Iibso ama Dhis Shabakadaada Emailka Si fudud
Sep 9, 2015 at 11: 10 AM
Waan ku raacsanahay. Raadinta wicitaanku waa aalad suuqgeyn weyn. Waxaan adeegsanay nidaamka raadinta wicitaanka Ringostat. Hadda waxaan ognahay kanaalada xayeysiinta ah ee soo saaraya inta badan dakhligeena kuwaas oo ah lacag lumis. Waxqabadka kooxdayada iibinta ayaa sidoo kale ka faa'iideystay muuqaalka duubista wicitaankeeda. Isku soo wada duuboo, aad ayaan ugu faraxsanahay qaybtaan softiweerka ah.